Ciidamada ammaanka Ruushka oo Moscow ku fashiliyay weeraro argagixiso oo ay ISIS qorsheysay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada ammaanka Ruushka oo Moscow ku fashiliyay weeraro argagixiso oo ay ISIS qorsheysay
December 15, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada ammaanka Ruushka oo Moscow ku fashiliyay weeraro argagixiso oo ay ISIS qorsheeyeen. [Sawirka: Archive]
Moscow-(Puntland Mirror) Haayadaha ammaanka federaalka dalka Ruushka ayaa magaalada Moscow ku fashiliyay weeraro is-xig-xiga oo ay soo qorshaysay kooxda Dowladda Islaamiga ah ee (ISIS), sida ay ku warantay wakaalada wararka Ruushka.
Koox u dhalatay dalal ajnabi ah oo ay kamidyihiin Tajikistan iyo Moldova ayaa ku lug lahaa weerarka, sida ay sheegtay wakaalada wararka dowladda maanta oo Khamiis ah.
Ciidamada ammaanka ayaa kooxda ku qabtay waxyaabo ay kamidyihiin walxaha qarxa.
Haayadaha ammaanka Ruushka ayaa adkeeyay amniga guud ee dalka Ruushka, iyaga oo ka cabsi qaba weeraro argagixiso oo ay kooxda ISIS ka geysato halkaas.
Ruushka ayaa taageero siiya dowladda Suuriya oo uu hoggaamiyo Bshaar al-Asad taasoo dagaal kula jirta kooxda hubaysan ee ISIS oo ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
October 19, 2016 Dagaalka Mowsil oo galay maalintii saddexaad
February 11, 2018 Diyaarad Ruushka leeyahay oo siday 71 qof oo rakaab ah oo burburtay